कुलमान घिसिङ्ग अमेरिका ”लोडसेडिंग ९ महिना भित्र ९ अर्ब घाटा बाट डेड अर्ब नाफा” (भिडियो)
Home/ भिडियो/कुलमान घिसिङ्ग अमेरिका ”लोडसेडिंग ९ महिना भित्र ९ अर्ब घाटा बाट डेड अर्ब नाफा” (भिडियो)
विजय थापा, अमेरिका। अमेरिकाको भ्रमणमा रहनु भएका नेपाल बिध्युय प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई अमेरिकाको वाशिंगटन डिसीमा नेपाली समुदायले स्वागत गरेका छन् । अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रमा स्थापित तामांग सोसाइटी अफ ग्रेटर वाशिंगटनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिसिङ्गलाई स्वागत गरिएको हो ।
घिसिङ्गलाई आयोजक तथा सहभागीहरुले खादा तथा मायाको चिन्ह प्रदान गर्दै सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रमको सुरुवात परिचयबाट गरिएको थियो भने घिसिङ्गले आफु पेशाले अभियन्ता भएको र प्राधिकरण कै कर्मचारी रहेको भनि छोटो परिचय दिएका थिए ।
घिसिङ्गले सन् २०१० मा डिसी आएको भन्दै यस पटक आफ्नो दोश्रो भ्रमण रहेको बताएका थिए । उनि बिश्व बैंकमा भाग लिन एको बताए । उनले बिगतमा अमेरिका विभिन्न राज्यबाट निम्तो आउने तर आफु समय अभावको कारणले भ्याईउदिन थे भने ।
उनलाई सहभागीहरुले ईमान्दारिता ,कार्यकुशलता तथा निष्ठाको कारण सबै नेपालीहरुले गौरवको महसुस गरेका छन् र यस्तै रही रहोस भनि शुभकामना दिएका थिए । नेपाललाई उज्यालो बनाई दिनु भएकोमा धन्यबाद दिएका थिए । कार्यक्रम संचालन समाजका अध्यक्ष उत्तर लामाले गरेका थिए ।
इन्द्रेणीमा कृष्ण र रुपालाई पैसाको बिटो हस्तान्तरण गर्न पुगे मन्त्री, पहिलो पटक दिल खोलेर हाँस्यो यो जोडी
बिहारीले यती राम्री लाई छाडा हर्कत गर्दै नाचेको भिडियो भाईरल …तपाईं पनि हेर्नुहोस्
फोन गरेरै आज साह्रै लुज भयो औटा टाउको लिएर आउनुस् भनेपछी
ज्ञानेन्द्रले गरे नेपाल-भारत सम्बन्ध बारे भारत बाट यस्तो खुलासा, के भने ज्ञानेन्द्रले? भिडियो सहित
ग्राण्ड फिनाले पछी नेपाल आइडलको यस्तो रमाइलो ! सागर आलेले गाए बुद्धले मादल बजाए, हेर्नुहोस भिडियो